दाँतले मानिसलाई सुन्दरता मात्रै दिएको छैन शरीर स्वस्थ राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण अंग पनि हो । दाँतको नियमित हेरचाह नगर्ने हो भने हाम्रो दाँतले धेरै समस्या उत्पन्न गर्ने गर्दछ । दाँतमा बिशेषगरी पहेंलो हुने समस्या देखिनुका साथै मुख गनाउने समस्या उत्पन्न हुन्छ । चुरोटको सेबन गर्नाले पनि दाँत पहेंलो हुन्छ भने कुनै खानेकुरा लगातार खानाले, उमेर […]
हामीले केराको फाइदा पढेका छौँ र नियमित खाने पनि गरेका छौँ तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ केराको फूल झन उपयोगी छ । केराको फूल खाँदा तपाईको धेरै रोग हटाउन सकिन्छ । जस्तै मधुमेह, डिप्रेसन एनिमियाबाट बचाउन यसले मद्दत गर्छ । त्यसलै केराको फुललाई दैनिक खानामा कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्नुहोस । केराको फूलबाट यस्ता […]
किसमिसको झोल पिउनुस्, कलेजो र किड्नी सफा पार्नुहोस्
सधैं बिहान किसमिसको पानी पिउनाले शरीरलाई भिटामिन लगायत फलाम पर्याप्त मात्रामा पान्छ । साथै यसमा चिनीको मात्रा पनि कम हुन्छ, यसमा प्राकृतिक एन्टीअक्सीडेन्टको मात्रा बढ्न जान्छ । जसले विरामी हुनबाट बचाउँछ । किसमिस र त्यसको पानीलाई कलेजो र किड्नीको बिरामीलाई निको पार्न प्रयोगमा आइरहेको छ। किसमिसको पानी लागातार ४ दिनसम्म पिउनाले कलेजो र किड्नीले राम्ररी […]
कुन राशिका लागि कति मुखे रूद्राक्ष राम्रो ? पुरा पढ्नुहोस
धार्मिक आस्थाका रूपमा रहेको रूद्राक्षले अलौकिक शक्ति प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस्तै, रूद्राक्षलाई आयुर्वेदिक औषधीमा समेत निकै उपयोगी हुने गर्छ । महाशिवरात्रीको दिनमा आफ्नो राशि अनुसार धारणीय रूद्राक्ष धारण गरेमा फलिफाप हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ । राशी अनुसार रूद्राक्ष प्रयोग गर्नाले धनको लाभ, परिवारमा सुख शान्ति, व्यापारमा बृद्धी हुने विश्वास गरिन्छ । […]
थाहा पाइराख्नुस् शनिका अशुभ संकेत !
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार हाम्रो जीवन ग्रहको आधारमा चल्छ । हाम्रो जीवनमा हुने हरेक घटनामा ग्रहको प्रभाव हुन्छ । अफ्ठ्यारो भनिएको शनि ग्रहको स्थानान्तरणसँगै मानिसको जीवनमा परिवर्तन हुने सम्भावना हुन्छ । शनि अशुभ भएका राशिका ब्यक्तिलाई विभिन्न संकेत देखिने ज्योतिष शास्त्रको भनाइ छ । थाहा पाइराख्नुस् शनिका अशुभ संकेत : शनि प्रतिकुल भएपछि मानिसमा नराम्रा कुराप्रति बढी […]
पूर्वीय दर्शनले ज्योतिषशास्त्रलाई स्वीकार गरेको छ । अझैपनि लाखौं मान्छे ज्योतिषशास्त्रलाई आधार मानेर आफ्ना कामहरु अगाडी बढाउछन् । मान्छेको जीवनमा ज्योतिषशास्त्रको दृष्टिले उ जन्मेको महिनाले पनि धेरै फरक पार्छ । कुन महिनामा जन्मेका महिलाहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ् यो पढ्नुहोस्– बैसाख : यो महिनामा जन्मिएका महिला सामान्यतय सुन्दर आँखा भएकी हुन्छन् । यी महिलाको स्वभाव सरल […]
खानाको स्वाद बढाउन लसुनको प्रयोग गर्छौं, र विशेष गरी सबैले दाल झाद्ना यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ र यो धुलोको लागि प्रयोग गरिन्छ। तर सायद तपाई लसुनका फाइदाहरू बारे केहि पनि थाहा छैन कि एक पोटिले हाम्रो शरीर धेरै रोगहरूबाट बचाउँछ। एक त तपाईंको खाने बानीहरू बढाउँछ र अर्कोतिर तपाईंको स्वास्थ्यको हेरविचार गर्दछ। यदि तपाईं यसको […]
जीवनमा सफलता पाउने १० सुत्रहरु
मानिसले सफलता प्राप्त गर्नलाई केहि न केहि बिषयमा अध्ययन गर्नु र तेस्लाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्नु पर्दछ । सफलता पाउनको लागि निम्न उपायहरुले मद्धत गर्न सक्दछ । १.खतरा सँग नडराउनुहोस्: यदी तापाई आफ्नो काममा सफलता चाहानुह्न्छ भने अलीकती खतरा मोल्नु आवश्यक हुन्छ। कुनै काम गर्न मन लागेको छ भने त्यो गरिहाल्नुहोस र त्यसमा दत्त चित्त भएर लाग्नुहोस […]
प्रेम भन्ने शब्द सुन्दा जति सुन्दर छ, त्यतिनै यसको भाव पनि गहिरो छ । प्रेम एउटा आफैमा अपूर्ण शब्द हो । जसले यो प्रेम शब्दलाई पुरा गर्न चाहन्छ, उसले पूर्ण बनाउन पनि सक्छ र सक्दैन पनि । त्यसैले गर्दा यो प्रेम शब्द अपूर्ण छ । आजकलका युवा युवतीहरु उमेरको चाहना र भावना अनुसार आत्मीय साथीको […]
केहि शाकाहारी परिकार बनाउने सामाग्री तथा विधिहरु
राजमा ग्रेवी राजमा एउटा प्रोटिनयुक्त व्यन्जन हो र यसको धेरै परिकार बनाउन सकिन्छ । हाम्रो परम्पराहरूमा पनि राजमाको ठूलो महत्व छ क्वाटी बनाउँदा विवाह भोजहरूमा र दैनिक भोजनमा समेत र यहाँ धेरै सजिलो तरिका दिइएको छ । सामाग्री : ५०० ग्राम राजमा १ दिन अगाडि पानीमा भिजाउनु १०० ग्राम प्याज काट्नु १०० ग्राम टमाटर पिस […]